WARARKA Archive | TOP NEWS | Page 551
Home»Archives»WARARKA (Page 551)
Liiska magacyada Xildhibaanada Somaliland ee maanta la doortay oo la shaaciyay
By Tifaftiraha Somalida Maanta on January 8, 2017 WARARKA
Lix ka mid ah Xildhibaanada Gobolada Waqooyi ku meteli doono Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxaa maanta lagu doortay Magaalada Muqdisho. Xildhibaanadan oo mid ka mid ah ay haweeney tahay, ayaa codad badan kaga guuleystay xubnihii kale ee kuraastaasi kula tartamaayay. Xildhibaanada la doortay waxay kala yihiin:- Xildhibaan Cabdi Xaashi C/laahi Xildhibaan Muxudiin Sheekh […]
DAAWO SAWIR Qosol badan oo laga sameeyay Xildhibaan Jawaari
Sawir gacmeedkaani qosolka badan ayaa waxaa lagu cabiray Guddoomiyihii Hore ee Baarlamaanka Somalia Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo lagu sido mid kamid ah noocyada gawaarida lagu riixo carruurta aadka u da’da yar. Jawaari ayaa waxaa dultaagan dhalinyaro lagu miisaaliyay inay ka tirsan yihiin Xisbiga talada dalka haya, kuwaa oo juhdi ku bixinaaya sida mar kale […]
WAR CUSUB: Maxaa kasoo baxay kulankii qarsoodiga ahaa ee u dhexeeyay Sheekh Shariif, Cumar C/rashiid iyo Imaaraadka
Sida aan wararkeena hore kusoo sheegnay Ra’isul wasaaraha xukuumada Somalia Cumar C/rashiid iyo Madaxweynihii hore ee Somalia Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku kulmay magaalada Nairobi. Labadan mas’uul oo horel ula kulmay dowladda Kenya ayaa lagu warramayaa in iminka ay si wada-jir ah ula kulmeen safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya Mohamed Al-Cutmani. Ilo lagu kalsoon yahay […]
Guddoomiye Xasan Khaliif ”Dowlada Somalia kama aqbali doono inay nagu qaalqaaliso in naloo keeno AMISOM”
Maamulka Puntland ayaa qaadacay in Ciidamo ka tirsan AMISOM la geeyo deegaanada maamulka Puntland, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Puntland Xasan Maxamed Khaliif oo u waramaayay warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay heleen xogo muujinaaya in Dowlada Somalia ay wado qorsho magaalada Gaalkacyo lagu dejinaayo Ciidamo ka tirsan AMISOM. Guddoomiye Xasan waxa […]
Ciidamada Nabad Suggida oo qabtay mooto waxyaabaha qarxa ay saaran yihiin
Ciidamada Nabad Suggida Somaliya, ayaa gacanta ku dhigay mooto nooceeda uu yahay dhugdhugleey, taasi oo ciidanka ay ka qabteen Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha hoose. Saraakiil ka tirsan ciidamada NISA, ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay mootadan oo ay saarnaayeen Jaakadaha qarxa iyo qaraxyo kale in ciidanka ay heleen xogtooda kadibna ay uga hortageen Degmada Afgooye. Mootada […]
Xasan Sheekh oo Kumanaan dollar ku bixinaaya sida mar kale lagu dooran lahaa Jawaari
Dowlada Somalia ayaa dhaqaale xoogan ku bixineysa dib usoo laabashada Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kamid ah Musharaxiinta looganka ugu jira qabashada xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Somalia. Dowlada Somalia ee gabalkeeda uu dhacay ayaa raja ka qabta in Jawaari uu mar kale hogaamiyo Baarlamaanka cusub, iyadoo cudur daar laga dhigaayo inuu leeyahay khibrad ku filan. Dowlada […]
Sidee ayuu Axmed Madoobe u galay Xildhibaan Xiddig
Ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa xabsiga dhigay Kontomeeyo ruux oo isugu soo baxay Banaanbax ay ku muujinayeen taageerada Musharaxa Gudoomiyaha BFS Cabdirashid Maxamed Xiddig. Ciidamada maamulka ayaa xiray ku dhawaad 12 ruux oo kamid ahaa ragga soo abaabulay dibadbaxa, kuwaa oo la sheegay in dhaqaale xoogan ay ku qaaten muujinta Banaanbaxyada. Ciidamada ayaa la […]
Sababta ka danbeysay dib u dhaca Doorashada Aqalka Sare Gobolada Waqooyi oo la shaaciyay
Guddoomiyaha guddigaasi Gen Jaamac Maxamed Qaalib ayaa ku eedeeyay dib u dhaca ku yimid doorashada xubnaha aqalka sare ee gobollada W/qooyi ee Soomaaliland guddiga doorashada dadban. Jaaamac Max’ed Qaalib ayaa sheegay in howlaha laga doonayay guddigooda ay soo idleeyeen muddo bil ka hor balse guddiga doorashada dadban ay heystaan sanaadiiqdii cod bixinta iyo shaqaalihii ka […]
Dowlada Chad oo Kooxaha Argagixisada ah ka xiraneysa Xadka ay la wadaagto Liibiya
Dawlada Chad ayaa xiray xadka ay la wadaagaan Liibiya iyagoo hadda qorsheynaya inay ciidamo geeyaan meeshaasi dadaal lagu doonayo in looga hortago dagaalyahanada kasoo cararaya colaadda dalka deriska la ah ee waqooyiga. Chad ayaa ka walwalsan in dagaalyahanada ay usoo carari doonaa xagga koonfureed ee xuduuda oo ay kooxaha isugu yimaadeen xagga koonfureed ee Liibiya. […]
By Tifaftiraha Somalida Maanta on January 8, 2017 ENGLISH, WARARKA
« Previous 1 … 549 550 551 552 553 … 660 Next »